२०७८ आषाढ ३१ गते १२:३५ बजे प्रकाशित
काडमाण्डौं : राजनीतिको अर्थ असल नीति हो तर हाम्रो नेपालमा यसको ठिक बिपरीत छ । डन र धनको बलमा राजनीति चलेको छ। नीति बिपरीत भएपछि परीणाम पनि बिपरीत आउनु स्वभाबिक होइन ? दलका नेतालाई भ्रष्ट कसले बनायो ? एक पटक छातीमा हात राखेर सोचौँ त ! चुनावका बेला करोड खर्च गर्न ,चुनाव सकिएपछि अरबौँ कमाउँने सोच कसले पाल्यो ?
यो पार्टी त्यो पार्टी नभनौं गुण्डा नपाल्ने पार्टी नै छैनन् ! हत्या हिंसा आतङ्क नमच्चाईं पार्टीको उपल्लो तहमा पुग्नै नसकिने भयो ? जो "सोजो उसको मुखमा घोचो" नेपाली राजनीतिमा प्रष्ट देखिएको छ।
आफ्नो सरकार हुँदा बिग्रेको भत्केको बाटो नदेख्ने ! भ्रष्ट«चार, बलात्कार, अराजककता ,महङ्गी केहि नदेख्ने ! आफ्नो सरकार नभएको भोलीपल्टै जताततै भद्रगोल नै भद्र्गोल देख्ने कस्तो नजर होला ? कस्तो चस्मा लगाएका होलान् ? आफ्नो घर अगाडी बिग्रेको बाटो नदेख्ने,घर भित्र पानी छिरेर नागरीकको बिल्लीबाठ भएको नदेख्ने, प्रदेश सांसद, सघीय सांसद सरकार नभएको भोली पल्ट सबै छर्लङ्ग देख्छन् । वा ! कस्तो नजर, मान्न पर्छ ।
पटक पटक उहाँहरु जस्तो असल नेतालाई नै भोट हाल्न पर्छ ! उहाँहरु जस्तो असल बिकास प्रेमी नेता पाउनु हाम्रो भाग्य हो । फेरी चुनाव आउँदै न ? ख्याल राखौं है ! भोट हाल्न पर्छ,सकिन्छ भने नोट लिन पर्छ ? होइन भने एक छाक खाएर भए पनि नेता बनाउन पर्छ । नेता भएको भोली पल्ट तपाईंहरुलाई चिन्दैनन् ! फरक केहि पर्दैन,अर्को चुनावमा चिनीहाल्छन् । वा !
अन्तिम अपडेट : २०७८ आषाढ ३१ गते १२:३५ बजे